www.xamarcade.com » Madaxweynaha Soomaaliland oo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka kala hadlay heshiiska Dekadda Berbera.
Madaxweynaha Soomaaliland oo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka kala hadlay heshiiska Dekadda Berbera.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxaa uu xaalada ku aadam heshiiska dekadda Berbera kala hadlay gudoomiyaasha xisbiyada Mucaaradka Soomaalilaand ee UCID iyo Wadani.
Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulanka la qaatay Feysal Cali waraabe iyo sidoo kale C/raxmaan Maxamed Cirro waxaana uu kala hadlay sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen go’aan mideysana uga qaadan lahaayeen diidmada dowladda Soomaaliya ee heshiiska dekadda Berbera.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka ayaa waxaa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu Hogaamiyaasha xisbiyada UCID iyo Wadani kala hadlay xiisadaha ka soo cusboonaaday heshiiska dekadda Berbera islamarkaana ay isla garteen in madax banaanida Soomaaliland ay tahay muhiimada 1aad sida uu afhayeenka sheegay.
Kulanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu la qaatay madaxda xisbiyada ayaa imaanaya kadib markii 5-tii bishan aan ku jirno gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro uu dhaliilay heshiiska sadex geesoodka ah ee dekadda Berbara .
Hase yeeshee Golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta xaarantimeeyay heshiiskasta oo gudaha dalka quseeya ee lala galay shirkadda DPworld ee Imaaraadka laga leeyahay.